Lacagaha ay kooxda Barcelona doonayso inay kula soo wareegto weeraryahan Luka Jovic oo daaha laga rogay – Gool FM
Haaruun March 21, 2019
(Barcelona) 21 Maarso 2019. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la soo warinayaa inay go’aansatay inay sare u qaaddo xiisaha ay ku qabto Weeraryahanka naadiga Benfica ee Luka Jovic.
21-sano jirkaan kaasoo heshiis amaah ah ku jooga kooxda Eintracht Frankfurt ee dalka Jarmalka ayaa bandhig cajiib ah ka sameeyey kubadda cagta Yurub intii lagu guda jiray xilli ciyaareedkan, taasoo soo jiidatay kooxo badan oo ay horboodeyso Barcelona.
Wadar ahaan weeraryahankan 22 gool ayuu ka dhaliyey horyaalka Bundesliga iyo Tartanka Europa League, kooxda Barcelona ayaana ka mid ah tiro kooxo ah oo la la xiriirinayo xiddigan xulka qaranka Serbia.
Wargeyska The Guardian ayaa warinaya in kooxda Catalan ay isku diyaarinayso inay adduun dhan 50 milyan oo euro oo u dhiganta 43.28 milyan oo gini ku soo qaadato Luka Jovic.
Warbixinta waxaa kale oo lagu sheegay in todobaadyada soo socda ay Barcelona bilaabi doonto wada xaajoodka ay la galayso kooxda Frankfurt.
Barcelona ayaa la soo warinayaa inay sidoo kale xulasho u haysato inay soo qaadato Weeraryahanka kooxda AC Milan ee Andre Silva.
Farshaxamiiste ayaa 6-sano ka hor sameeyay Sawirka kuu muuqda, balse Messi ayaa dhab ka dhigay oo habeen dhaweyd sameeyay isla sidan....(Bal Arag)